SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: စစ်ကိုင်းမြို့က ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ
ကျွန်တော်၏ အမည်ရင်း မဖော်ပြခြင်းအားသည်းခံပေးပါရန်..အကြောင်းမှာမူ အမည်ရင်း ပြောပြလိုက်ခြင်း အားဖြင့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နှင့် နယ်ခံဖြစ်သောကျွန်တော်၏မိဘများမှာနောက်လာမယ့် ကိစ္စများ တွင် ဒုက္ခရောက်မည် စိုးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်… L ….။
ဖြစ်စဉ်…။ ကျွန်တော်၏ မိဘများမှာ စားသောက်ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားကြပါတယ်…ကျွန်တော်မှာမူ ၁၀ တန်းအောင်၍ ရန်ကုန်မြို့ကြီးသို့တက်ရောက်၍ မိဘများကိုအလုပ်အကြွေးပြုချင်သောကြောင့် ကိုယ်ဒူးကိုချွန်ကာ သင်တန်းတွေကြိုးစားတက်ပြီး အလုပ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်လာကာ ယ္ခု နောက်ဆုံးတွင် ဒေါ်လာစား လခရသော ရေနံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် လခစားဝန်ထမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား…။
အဲဒီမှာစတွေ့တာပါပဲခင်ဗျာ….သန်းခေါင်စာရင်းက စစ်ကိုင်းဇာတိဆိုတော့ ပုံစံ( ၁၇ ) က စစ်ကိုင်းကို ပြန်လုပ်ရတော့တာပါပဲ….။
ကုမ္ပဏီမှ ကျွန်တော်ရဲ့ စီနီယာ အကို အမများလည်း ရှေ့ကနဦးကတည်းက နိုင်ငံရပ်ခြား သွားနေကြတာတွေ လုပ်သက် ၂ နှစ်အတွင်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ ကြားသိနေရပါတယ်…ဒီလို ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးမှာတောင်.. ပုံစံ( ၁ရ ) လုပ်ကြတဲ့အခါတိုင်းမှာ ရုံးက လစာထုတ်တိုင်း MFTV BANK မှ လစဉ် ၀င်ငွေအခွန်ထမ်းဆောင်ပြီးကြောင်းထောက်ခံစာတွေနဲ့အတူ သွားခဲ့ကြတာ ယ္ခုချိန်ထိ ကျသင့်ငွေ ကျပ်ငွေ ငါးထောင် ( ၅၀၀၀ ) ပဲတောင်းခံပါသတဲ့..ပေးနေကြရပါသတဲ့။ ဒါလောက်ကတော့ဖြစ်သင့်ပါတယ် ပေးလို့ ကြည်ဖြူ လျှောလျှော လျှူလျှူ ပေးနိုင်ပါတယ်..။
သူတင်မကပါဘူး သူ့အရာရှိ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လတ် ပိုဆိုးသဗျာ ..။ အဲဒီ အမျိုးသမီးဗျာ မျက်နာထားက တော်တော် တင်းထန်ပါတယ်…သူ့ဆီက ပိုက်စံလာတောင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ကို ဟောက်လိုက် ဆိုလိုက် ပြောလိုက်နဲ့ဗျာ…။
အဲဒါဆို သန်းခေါင်စာရင်းလေးပြပါဆိုလို့ ကျွန်တော် ပါလာတဲ့ စာရွက်စာတမ်း အစုံလိုက်ကို သူ့ကိုပေးလိုက်ပါတယ်…။ စာရွက်ကြည့်ပြီး သြ….ဦး--- ရဲ့သားကိုးတဲ့…. …။ စတင်ပြီး အပြစ်ရှာ ပါတော့တယ်…။ မင်းအဖေက စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်တာကို အခွန်ဘယ်တော့မှ မဆောင်ဘူး ပတ်ပြေးနေတာတဲ့…..ကျွန်တော် တော်တော် အံ့သြ သွားတာပါ..တကယ်လည်း အဲဒါကိုမသိပါဘူး….။
အကိုကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေကိုင်ပြီး ဒေါသတွေနဲ့ ရောက်လာပါတယ်…အဲဒီ ခိုင်ခိုင်လတ် အခန်းထဲ ဝင်သွားပါတယ်…အကိုက စာရွက်တွေပြပြီး ဆောင်ထားတာ ၂လပဲရှိသေးတယ် ခင်ဗျားတို့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုတွေပြောတာလည်း ဆိုတော့…. ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့ စကားလမ်းကြောင်းတွေလွှဲပြီး အဲဒီ ဆောင်ထားတဲ့ အခွန်ကိုတောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး..ကြိုတင်ခွန်ဆောင်ဖို့တောင်းတာပါ ဆိုပြီး လေသံတွေ လျှော့သွားပါတယ်..(စောနက လေသံထက်အနည်းငယ်ပေါ့) ။
ကြိုတင်ခွန်က ဘာလို့ဆောင်ရတာတာလည်းမေးတော့ …စားသောက်ဆိုင်တိုင်း ပေးပြီးပြီ မင်းတို့ပဲ မပေးသေးတာလို့ ဆိုပြန်ပါတယ်…။ ဒါနဲ့ အကိုကြီးလည်း ဟုတ်ကဲ့ အဲဒါဆို ခဏနော် ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ပြီး အပြင်ထွက်လာပြီး သူ့ရဲ့ နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်း စားသောက်ဆိုင်တွေကို အမြန်ဆုံးမောင်နှင်ပြီး လိုက်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းကြပါတယ်…ဘယ်သူမှ မဆောင်ရသေးပါဘူးတဲ့…ကဲ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အရှက်မရှိစတမ်း တောင်းနေတာနော်…။ ဒါနဲ့ပဲ အခွန်ရုံးပြန်လာ အကိုကြီးက အချက်အလက်နဲ့ ပြောတော့…အဲဒီမိန်းမ မျက်နာက စိတ်ပျတ်လက်ပျတ်နဲ့ အရှက်မရှိစွာနဲ့ …ဒါက ဒီလို အလွယ်ပြောလိုက်တာပါ…အမှန်က နိုင်ငံခြားသွားတဲ့လူတိုင်း ကြိုတင်ခွန်ဆောင်ရတာတဲ့… ။ မဆောင်ရင် လုံးဝကို ပုံစံ(၁၇) မပေးနိုင်ပါဘူး လို့ပေါ်တင်ကိုပြောပါတယ်ဗျာ…။ သွားတာက ကျွန်တော်ပါ..ခုက အဖေပိုင်ဆိုင်တာကို အခွန်လည်းဆောင်ပြီးပါပြီ….မဆိုင်တာတွေကို အတင်းထပ်ခါထပ်ခါ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လှည့်ပတ်တောင်းနေတာပါဗျာ ကဲ။
ပြီးတော့ မျက်နာထားတင်းတင်းနဲ့ မင်းတို့ ကို အပေါ်ကတောင်းတဲ့အတိုင်း မတောင်းချင်လို့… ဒါကိုမင်းတို့က ဖြစ်ပျက်နေတယ်လည်းဆိုရော..ကိုကြီးက ကောင်းပြီး ကျွန်တော်တို့ ဆောင်မယ် ..ဆောင်ရင် အရင်က ဆောင်ထားသမျှတွေကို ခင်ဗျာတို့ ဘောက်ချာနဲ့ လက်မှတ်ထိုးပေးပါ.. ခုလက်ရှိဆောင်တာရော ထိုးပေးပါလို့ပြောတော့… အို….အဲဒါတော့ဘယ်ဖြစ်မလည်းတဲ့… ဘောက်ချာ လက်ခံ တောင်းတော့ အတော် ကြောက်ကန်စွာငြင်းပါတယ်..။ ကဲ ပြည်သူများ အရာရာ ခံဘက်က ကြီးပါပဲဗျာ….။ အလုပ်သွားလုပ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ကုမ္ပဏီက သင်တန်းတက်ခိုင်းလို့ သွားတက်ရမှာပါဗျာ နိုင်ငံခြားလည်းမရောက်ဖူးတော့ သွားချင်တာပေါ့ဗျာ…မိဘ တွေကဆို နိုင်ငံခြား သွားရလို့ဆိုပြီး ဂုဏ်တွေယူပြီး တပြုံးပြုံးဖြစ်နေကြတာလေ အဲလိုရိုးသားကြတဲ့ နယ်ခံတွေပါဗျာ..။
ကုမ္ပဏီ ကနိုင်ငံခြား ထပ်လွှတ်ရင်တောင် အကိုနဲ့ ဖေဖေ မေမေ တို့ကို သနားလွန်းလို့ သွားရဖို့တွက် စစ်ကိုင်းက ပုံစံ (၁၇) လုပ်ရမှာတောင် ကြောက်နေပါပြီဗျာ… ကယ်ကြပါဦး အရပ်ကတို့ရေ….ဒါက စစ်ကိုင်းက ပုံစံ (၁၇) လုပ်ပုံလုပ်နည်းပါခင်ဗျ…ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သား တခြားနယ်သား တွေတောင် ဒီလောက် ခက်မယ်မထင်ပါဘူး….ဟူးးးးးး…။
အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ကို သနားညှာတာသောအားဖြင့်..ဤလို ဝန်ထမ်းများအား အမြန်ဆုးံ ဆုံးမအရေးယူနိုင်သောသူ ပေါ်ပေါက်လာပါစေ….။ ဤစာရသောသူများလည်း ကျွန်တော်နှင့် ရိုးသားသော နယ်သူနယ်သား မိဘ မောင်နှမ များအား သနားသောအားဖြင့် လက်လှမ်းမှီရာ လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် ကူညီပေးပါရန်….လေးစွားစွာ ဖြင့် အသနားခံ တောင်းပန်အပ်ပါသည်ခင်ဗျား….။